पाँच महिनामा विदेशबाट ५ करोडको कन्डम भित्रियो – उज्यालो खबर
चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को पाँच महिनामा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कन्डम भित्रिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा विदेशबाट ५ करोड ३२ लाख रुपैयाँको कन्डम भित्रिएको हो ।
साउनदेखि मंसिर महिनासम्ममा २ करोड ७९ लाख ५ हजार वटा कन्डम भित्रिएको विभागले जनाएको छ । विश्वका सात वटा मुलुकबाट नेपालमा कन्डम आयात हुने गरेको छ । भारत, चीन, कोरिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अमेरिकाबाट कन्डम भित्रिएको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ ।
जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट मात्रै ४ करोड २८ लाख ७५ हजार रुपैयाँको कन्डम आयात भएको छ । यसपछि कोरियाबाट ३२ लाखको, मलेसियाबाट २८ लाखको, थाइल्याण्डबाट २७ लाखको र चीनबाट १५ लाख रुपैयाँका कन्डम आयात भएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
यसबाहेक, अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट नगन्य मात्रामा मात्रै कन्डम भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा विदेशबाट नेपालले २४ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ६० करोड १० लाख वटा कन्डम आयात भएको थियो ।
अमेरिकाले एमसीसी पास गर्न नेपाललाई धम्की दिइरहेको छ, हामी प्रतिरोध गर्छौंः चीन
गायिका लता मंगेशकरको निधन
आइतवारदेखि कसरी लिने अनलाईनबाट श्रम स्वीकृति ? के के कागजात चाहिन्छन् ? कति लाग्छ समय ?
एक पुरुषले जन्माए छोरा
अमेरिकाको एउटा अपार्टमेन्टमा आगलागी हुँदा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गयो
भारतमा ओमिक्रोन : दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध, सबै शैक्षिक संस्था बन्द गरिने
अस्ट्रेलियाको सीमा खुल्यो, को-को जान पाउँछन् ?